Chamisa's youths re-takes over Harvest House - The Zimbabwe Mail
HomeMainChamisa’s youths re-takes over Harvest House
“It was a nice and clean retake,” The paper quoted one of the youths saying.
Political Analyst Pedzisai Ruhanya corroborated with the reports saying, “MDC Alliance youths takes over Harvest House months after security services assisted Khupe group to storm the HQ. This could be temporary because Khupe group is supported by ZANU PF and security forces.”
Meanwhile, on Saturday, youths aligned to MDC Alliance leader Nelson Chamisa and his political rival in MDC-T interim president Thokozani Khupe Saturday had violent clashes over the control of the party’s offices in Kwekwe.
“The Zanu-PF extension led by Douglas Mwonzora and Thokozani Khupe in the early hours of today (Saturday) besieged our offices in Newtown where our security officer, administrator, and three female leaders including our provincial chair were going through their business as usual and used violence to chase them from the offices,” Gwamuri said.